Semalt Expert Anotsanangura Zvakanaka Kwazvo Web Scraping Service
Nokufambira mberi mune sayenzi uye teknolojia, nzira iyo mabhizimisi ari kubudirira munyika yose zvikuru. Zuva rimwe nerimwe, maitiro matsva ekutsvaga dhiyabhorosi anotangwa, achiita zvakakosha pamabhizimisi uye kuunganidza mashoko chaiwo kubva kumadziro ekutanga uye epamusoro ewebhu. Dhiyabhorosi kuongorora kana kugoverwa kwemigodhi kunobatsira kuwedzera mabhizimisi edu - altalene in plastica per bambini. Tinogona kufanotaura zviri nyore misika yemakambani nemashoko akarongeka zvakanaka uye akavakwa zvakanaka.
Chii chinonzi SiteScraper?
SiteScraper inoyevedza kuverenga kudyidzana kana zvigadzirwa zvemigodhi inoenderana nevatengesi vedikijiti, nyanzvi dzezvemagariro evanhu, uye mabhizimisi akavakwa zvakanaka. Nechinhu ichi, unogona kunzwisisa zvinhu uye zvinhu zvaunoda uye zvinogona kukura bhizimisi rako kusvika pamwero. SiteScraper inowanikwa mune zvose zviripo uye shanduro yepamusoro. Iko freeware ine nhamba shomanana yezvasarudzo, asi chirongwa chepayimusi chichazarura zvinhu zvakasiyana siyana zvausingawani mune chero imwe yemhando yekugoverwa kwemigodhi. Zvimwe zvezvinhu zvakakurumbira izvo zvinogadzira SiteScraper chisarudzo chakanakisisa chinokurukurwa pasi apa.
1. Inobatsira kuziva nhamba dze data
Kusiyana nedzimwewo zvinyorwa zvekutsvaga kwemashoko kana zvigadzirwa zvemigodhi, SiteScraper inonzwisisa zvinyorwa zvepa data yako uye inokutora mashoko akabudiswa zvakanaka kubva pamapeji ewebhu akasiyana. Chimwe chezvinangwa zvekutsvaga SiteScraper ndechokuti iwe unogona kukanganisa data kubva kumawebsite ako aunoda asingabatanidzi sezvo shanduri iyi inoita mabasa ayo ega uye haiti kuti iwe uve nehumwe unyanzvi hwekugadzira.
2. Iyo inokanganisa ma-multi-level category listings
SiteScraper ndeimwe yezvishoma zvinyorwa zvekutsvaga uye zvigadzirwa zvemigodhi zvine zvigadziri zvinoparadzanisa zvikamu zvakasiyana-siyana uye kuongororwa kwemasero zviri nyore. Zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa chigadziro ichi uye unotsvaga zvido zvinodiwa kubva kuBay uye Amazon-sezvitoro zvepaIndaneti. Iwe unogonawo kutarisa mafambisi ekufambisa uye nzvimbo dzemashoko ne SiteScraper uye unogona kugadzira mazita nemapoka e data yako yakatsvaga pasina chero dambudziko. Its Its Category Scraping feature inobatsira kubvisa ruzivo kubva kune zvigadzirwa pasi pezvikamu zvakasiyana zvekutengesa mabhizimusi.
3. Tsvaga mazwi makuru
SiteScraper's keyword search feature inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uite tsvaga uye uwane zvakakosha mazwi kana data yako iri kutorwa. Icho chinoreva kuti deta yakabudiswa ichava nematambudziko emazwi makuru nemitsara inogona kubatsira kutarisa kana kurongedza nzvimbo yako mune nzira iri nani.
4. Simba rekunyora coding
5. Inoita zvisingazivikanwi kuburikidza ne proxy server
Ne SiteScraper, unogona kukanganisa data yako usingabvumi kuti nyika ione kana kuti ione yako IP address. Ichi chishandiso chinogona kushandiswa zvisingazivikanwi kuburikidza neproxy yayo yeproxy uye inovanza kero yako yeHIP, ichikupa kuchengetedzeka kwakakwana neukwangara apo data iri kuiswa. Iwe unogona kusarudza kubva kune ma-server akawanda kuti uvanze IP yako uye uchengetedze kuchengetedzwa kwako paIndaneti nekudzivirirwa.